IOS7Jailbreak မှာ Sceeen Lock And Unlock ကို မည်သည့် BUTTON မျှ လုံးဝ ( လုံးဝ) မသုံးပဲ အပိတ်အဖွင့်ရပါပြီ ~ Mobile Knowledge
IOS7Jailbreak မှာ Sceeen Lock And Unlock ကို မည်သည့် BUTTON မျှ လုံးဝ ( လုံးဝ) မသုံးပဲ အပိတ်အဖွင့်ရပါပြီ
Posted on 9:46:00 PM by Ko Ye
ပိုစ့်ရေးသားသူ- Kyaw Zin Thet(Myanmar Mobile Users Group)
ဒီတစ်ခါရှာဖွေရကျိုးတော်တော်နပ်ပါတယ်ဗျာ… ကောင်းလိုက်တဲ့ tweak …. ပျော်ထွာ…
တစ်ခါတည်းက android သူငယ်ချင်းတွေ ဖုန်းကို lock and unlock ကို လက်ဖျားနဲ့တောင်မထိပဲ proximity sensor သုံးပြီး
အဖွင့်အပိတ် လုပ်ပြသွားတယ်ဗျာ… နင်တို့လုပ်ရလားတဲ့ အဲတုန်းက ငုတ်တုတ်မေ့နေတယ်ဗျာ.. အခုတော့.. လာထား……
***** IOS7jailbreak မှာ Sceeen Lock and Unlock ကို မည်သည့် BUTTON မျှ လုံးဝ ( လုံးဝ) မသုံးပဲ
အပိတ်အဖွင့်ရပါပြီ ။ လက်တစ်ချက် လှုပ်လိုက်တာနဲ့ အဖွင့်အပိတ် အဆင်ပြေပါပြီ . *****
tweak name : SleekSleep
sources : iphone.gsm.vn
available : ios6, ios7, test on my iphone 5
require tweak : Activator
၁။ Activator လိုအပ်ပါသည်။ မရှိသေးသူများ အရင်ဒေါင်းပြီး အင်စတောလုပ်ထားပါ.
၂။ soruces မရှိသေးသူများ iphone.gsm.vn ကို အပ်ပါ။ ပြီးရင် cydia >> search မှာ SleekSleep ကို ရိုက်ရှာပါ
၃။ အင်စတောလုပ်ပါ။ reboot device လုပ်ပါမည်။ (reboot လုပ်ရင် tweak ပျောက်မှာစိုးရိမ်သော ဘော်ဒါများ comment
၄။ တက်လာပါက Setting >> SleekSleep မှာ Sleek Sleep Enabled = on, Sensor Insomnina = on,
Disable when calling = on, Portrait Only = on or off ( as you wish), Activator Event = on လုပ်ထားပေးပါ။
၅။ Home Screen ကနေ screen lock ချရင်အတွက် Activator >>>> At Home Screen >>> PROXIMITY (SleekSleep)
ကို နှိပ်ပါ ပြီးရင် >>> Lock Device ကို ရှာပြီးတွေ့ရင် နှိပ်လိုက်ပါ . အဆင်ဆင့် back နှိပ်ပြီး ပြန်ထွက်ပါ.
၆။ Lock Screen ကနေ Screen unlock အတွက် Activator >>> At Lock Screen >>> PROXIMITY (SleekSleep)
ကို နှိပ်ပါ ပြီးရင် >>> unlock Device ကို ရှာပြီးတွေ့ရင် နှိပ်လိုက်ပါ . အဆင်ဆင့် back နှိပ်ပြီး ပြန်ထွက်ပါ.
၇။ မိမိ device ကို စမ်းသပ်ကြည့်ပါ
****** ( SleekSleep ) သည် proximity sensor ပေါ်တွင် အရှိန်တစ်ခုဖြင့် ဖြတ်သွားမှသာ အလုပ်လုပ်ပါသည် ။ ထို့ကြောင့် cover သုံးထားသော flip cover များဖြင့် အလုပ်မလုပ်ပါ ။ cover ပိတ်လိုက်ရင် ပိတ်မသွားပါ. cover ဖွင့်လိုက်ရင်လည်း ပြန်ပွင့်မလာပါ ။ sensor ပေါ်ကို velocity တစ်ခုဖြစ် ဖြတ်သွားမှ အလုပ်လုပ်ပါမည်.
**** တစ်ခုကောင်းတာက ကိုယ်က lock ချထားတာကို ဘောင်းဘီအိပ်ထဲထည့်တာတို့ အိပ်ကပ်ထဲထည့်တာတို့ တစ်ခုခုနဲ့ ဖိထားတာတို့ ဆိုရင် ပြန်မပွင့်ပါဘူးးဗျာ. ကျွန်တော်ပြောချင်တာက တစ်ခုခုက sensor ပေါ်က ဖြတ်မှ အလုပ်လုပ်ပါမည် ။ အရှိန်မြန်လွန်းလျင်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ဒါကြောင့် အိပ်ကပ်ထဲထည့်တာတို့ ဘာတို့ညာတို့ဆို ပြန်ပွင့်မှာ စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး …
*** စိတ်ချရအောင် setting မှာ seipe timeout ကို အများဆုံး ၃၀၀ MS ထားပေးပါ… အေးဆေးပါပဲ
+++++ အားလုံးလိုချင်ကြမယ်ထင်ပါတယ် iphone5s လို လက်ဗွေရာပေါ်တောင် တင်စရာမလိုပါဘူး လက်တစ်ချက် ဝှေ့ရမ်း